Spotify na - ebulite ọnụahịa nke atụmatụ ezinụlọ site na otu euro | Gam akporosis
Ọrụ gụgharia egwu, dị ka ọrụ vidiyo, abanyela na ndụ anyị na ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-enweghị ike ibi ndụ na-enweghị ha, yabụ ọtụtụ n'ime anyị, mgbe nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a nwere ịrị elu na ọnụahịa, anyi were ya n’enweghi nchekwube.
Onye na - eweta ọrụ gụgharia ohuru nke bulitere ọnụahịa nke ndenye ọ bụla ya bụ Spotify. Kemgbe Febụwarị, ịnye atụmatụ ezinụlọ ebilila otu euro, yabụ iwere ya site ugbu a gaa n'ihu ọ na-efu euro 15,99, maka 14,99 gara aga.
Ọ bụrụ na ị bụworị ndị ọrụ nke atụmatụ ezinụlọ, Spotify na-enye gị otu ọnwa nke amara, yabụ rue ọnwa Machị ị gaghị akwụ ụgwọ ọhụrụ ahụ. Maka ugbu a, atụmatụ ndị ọzọ nke ndenye aha ndị ụlọ ọrụ Sweden nyere ha na-edebe otu ọnụahịa ahụ.
1 Mgbanwe na-abịa
2 Spotify nwere aka elu
Ọnwa ole na ole gara aga, Spotify kwupụtara na ọnụahịa nke ọrụ gụgharia gị nwere ike ịba ụba, gbalịa dechapụ ego ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ emeela n'ime afọ abụọ gara aga wee si otú a nwee ike ịmalite, ozugbo na ihe niile, iji nweta nsonaazụ dị mma.
Na ụfọdụ ugwu Europe, ego Spotify bụ euro 10,99, maka euro 9,99 na Spain, maka ihe karịrị otu afọ, ya mere ugbu a na ha emeela ihe mbụ site n'ịzụlite atụmatụ ndenye ezinụlọ, ọ ga-abụ na ha agaghị ewe ogologo oge iji mụbaa ọnụahịa nke onye ndenye aha.
Spotify nwere aka elu
Ruo ọnwa ole na ole, Spotify ekweghị ka nyiwe ndị ọzọ nweta API ya bupu ndeputa E mepụtara ndị ọrụ na ọrụ a, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ọrụ egwu na-egwu egwu, ị ga-emezigharị ndepụta ahaziri iche, otu n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Spotify na-ewelite ọnụahịa nke atụmatụ ezinụlọ site na otu euro